အကောင်းဆုံး Multi Function Side Sealing Shopping Bag စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့် Multi Function Side Sealing Shopping Bag စက် စက်ရုံကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
ပုံစံ - SVG-800PH
ဘေးထွက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း မြန်နှုန်းမြင့် မော်ဒယ်
မတ်တပ်ရပ်ပါ။-Sealing Device ကိုတက်ပါ။
ဤစက်သည် စျေးဝယ်အိတ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ရန် ၎င်း၏ဘက်စုံသုံးနိုင်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။,soft loop handle လိုမျိုး,die cut လက်ကိုင်,poly draw နှင့် patch လက်ကိုင်အိတ်.
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် စက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။.
pneumatic ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် မောင်းနှင်သော Soft loop feeding system သည် တိကျပြီး လျင်မြန်စွာ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ဂဟေဆက်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။.
Die cut punching system တွင် မြန်နှုန်းမြင့် စတီးဓားများ တပ်ဆင်ထားသည်။,တာရှည်ခံရန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။.
Poly draw ထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာသည် ထိပ်ခေါက်နှင့် အလုံပိတ်ဧရိယာသို့ စာကြောင်းကို အလိုအလျောက် ဖြည့်သွင်းသည်။.
Patch handle စနစ်ဖြင့် အိတ်လက်ကိုင်အား အားဖြည့်စနစ်.
SVG-800PH ထိပ်ခေါက် 150~700 ထိပ်ခေါက် 150~540 250~၆၅၀ 75 မီလီမီတာအထိ 65 မီလီမီတာအထိ အိတ်အားလုံး:၁၀၀(အိတ်အရှည် 540 မီလီမီတာ) 0.04~0.09 8.8KW 7.၃x၂.0x2.2
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/multi-function-side-sealing-shopping-bag-machine.html
SHENG-FON PLASTIC MACHINE CO., LTD. ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်အထူးပြု Multi Function Side Sealing Shopping Bag စက်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တန်ခိုးအဖြစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြာပါသည်။ ဒါဟာအဆက်မပြတ်အသစ်ထွက်ကုန်သီးနှံသုတေသန, ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသူ့ကိုယ်သူတင်နိုင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားနိုင်ငံတကာကျော်ကြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရေရှည်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး Multi Function Side Sealing Shopping Bag စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Taiwan မှစက်ရုံတစ်ခုမှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ချိသူ၊ ဖြန့်ချိသူ၊ OEM နှင့် ODM တို့၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။